Amerika Latina 14 Jona 2017
Egypta: Ny Fihetseham-poko Manoloana Ny Famahanana Bilaogy
Tapa-kevitra ny hamahana bilaogy momba ny fiainanao sy miditra amin'ny antsipiriany manokana momba izany ianao. Ary gaga avy eo fa mamaky ny bilaoginao ny havanao sy ny namanao . Ankehitriny rehefa miseho ianao, moa ve ianao manana fahalalahana araka izay efa noeritreretinao ?
Hetsika Filazana Tantara Mikendry Hiarovana ny Fahasamihafana Ara-piteny
Amerika Avaratra 13 Jona 2017
"Ahoana izany hoe miresaka amin'ny mpihaino izay tsy mahatakatra ny fiteninao izany?"
Koety: 10.000$ Ho Fikojakojana Fiara Fotsiny!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 06 Jona 2017
Handany 10.000 $ ve ianao mba hikojakojana ny fiaranao ho mamiratra ? Fantatro fa tsy hanao izany aho, kanefa misarika ny saintsika momba ilay olona iray izay manao izany fotsiny ny bilaogera Libaney Mark, izay mipetraka ao Koety.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 03 Jona 2017
Manambatra ny zava-misy eny an-dalambe ao amin'ny faritra atsimon'iny tanàndehiben'i Bitola Makedonia nandritra ny Ady Lehibe I sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fampirantiana sary.
Amerika Avaratra 02 Jona 2017
Amerika Latina 02 Jona 2017
A "Digital Baptism" workshop brought digital inclusion to Belo Horizonte, the capital of the Brazilian state of Minas Gerais this Saturday, introducing the basics of using a computer to those who had never had the chance before or teaching more advanced tools to more advanced users. See some pictures and videos from the action packed day. Nitondra ny fampidirana nomerika ho ao Belo Horizonte , renivohitry ny fanjakana Breziliana Minas Gerais ny "Batisa Nomerika" tamin'ny Asabotsy,nampahafantatra ny fototry ny fampiasana ny solosaina ho an'ireo izay tsy nanana ny fahafahana ampiasa izany teo aloha na nampianatra ny momba ny fitaovana vaovao kokoa ho an'ireo mpisera efa mahay kokoa.Jereo ny sary sy lahatsary maromaro nandritra ny hetsika.